မျိုးနိုင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by ♣တောသူမလေး♣ Jan 4, 2012.9Replies0Likes
ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်း တရားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်း သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကို ယုံကြည်မြတ်နိုးခြင်းကို ဘယ်အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ထိ သင်သည်ယုံကြည်မြတ်နိုးပါသလဲ ဘာကြောင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာလဲ ဆိုတာကို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by 2bl8rpaehk8r4 Dec 19, 2011.4Replies0Likes
ပိဋိကတ် သုံးပုံကို အစအဆုံး အလွတ်ရခဲ့ရင် သေခြင်းတရားဆိုတဲ့ လူးလိမ့်နေအောင်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာဆိုးကြီးကို လွန်မြောက်နိုင်ပါသလား အပါယ်လေးဘုံကိုရော လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလား .....ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'ဗေဒင်အတိုင်းသာ သတ္တဝါတွေဖြစ်နေကြရင်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဒိဌိအရူးနာ ပျောက်ကြောင်းတရားတော်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ရုပ်နာမ်-သင်္ခါရ-အနိစ္စ တရားတော်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
venvima သည် မျိုးနိုင်'s၏ 'မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ရုပ်နာမ်-သင်္ခါရ-အနိစ္စ တရားတော်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'အသိဉာဏ်သည် ဦးနှောက်ထဲတွင်ရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Peaceangel သည်မျိုးနိုင်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ညီမစာမျက်နှာမှာ ဆုတောင်းလေးရေးပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်......း)"
မျိုးနိုင် replied to A BuddhismworldAdmin's discussion 'ခန္ဓာဆိုတာဘာလဲ......?'
"အခုလိုမှတ်သားသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း နောက်လည်းယခုလိုစာသားများကိုများစွာဝေမျှနိုင်ပါစေ များစွာဆွေးနွေးနိုင်ကြပါစေ။"
နီစံ (အနီ) သည်မျိုးနိုင်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အနီ လာလည်ပါတယ် ရေလိုအေးလို့ ပန်းလိုမွှေးပါစေနော်.. Friends18.com Rose Scraps"
မျိုးနိုင် replied to Peaceangel's discussion 'မိမိအား လူတို့၏ကြည်ညိုမူ့၊ တရားသိရှိမူ့ထက် ကျင့်ကြံအားထုတ်မူ့ကို ပိုမိုလိုလားတော်မူခြင်း'
"ညီမလေးတင်ထားတဲ့စာသားလေးတွေ ဖတ်ရတာကောင်းပါတယ်ညီမရယ် မြတ်စွာဘုရားက “၀က္ကလိ၊ ဤအပုပ်ကောင်ကို သင်ဖူးမြင်ခြင်းဖြင့် အဘယ် အကျိုးရှိမည်နည်း။ ၀က္ကလိ၊ တရားကိုမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မြင်သည်မည်၏။ ငါဘုရားကို မြင်သောသူသည် တရားကို မြင်သည်မည်၏ “ ဟု…"
မျိုးနိုင် သည် လင်းကိုကို's၏ 'သက်သက်လွတ်စားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး..'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားချက်တူပါတယ် သတ္တ၀ါတွေ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ တို့တွေဆုတောင်းကြတာပေါ့ ."
ယုယမေ သည်မျိုးနိုင်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကိုမျိုးနိုင် မတွေ့တာကြာပြီနော် သူငယ်ချင်းသတိရပါတယ် တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့တဲ့--- တရားအသိတရားရှိနိုင်ပါစေ"
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် မျိုးနိုင်'s၏ 'ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု.....သာဓု.....သာဓု ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အား ခြေတော်စုံဦးခိုက်ပြီးပူဇော်ကန်တော့လိုက်ပါတယ်ဘုရား..... တပည့်တော်တို့လည်းဒုက္ခအပေါင်းချုပ်ငြိမ်းစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော့မယ်ဘုရား။"
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည်မျိုးနိုင်'s ၏ 'ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
"Friends18.com Water Effect Scraps Friends18.com Rose Scraps Friends18.com Rose Scraps Friends18.com Rose Scraps Friends18.com Rose Scraps Friends18.com Rose Scraps"
ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ခန္ဒာဥာဏ်စိုက် သုညဆိုက် တရားတော်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 13, 2012 တွင်9:34pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ခန္ဒာဥာဏ်စိုက် သုညဆိုက် တရားတော်
(1) ဓမ္မခန္ဒာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာဆဲ တရား။
(2) အနုဓမ္မပဋိပတ္တိ၊ ထိုတရားနှင့် လျှော်စွာ ကျင့်တဲ့အကျင့်
တရားဓမ္မာ၊ ခန္ဒာမှာ၊ မှန်စွာအမြဲရှိ။
ပေါ်လာကြုံခိုက်၊ ဥာဏ်စူးစိုက်၊ အလိုက်နုပတ္တိ။
ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဒိဌိအရူးနာ ပျောက်ကြောင်းတရားတော်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 13, 2012 တွင်9:17pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments3Likes
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊ အသုဘမှန်စင်စစ်။
နိစ္စ၊ သုခ၊ ကိုယ်အတ္တ၊ သုဘထင်သည့်ဖြစ်။
ဖောက်ပြန်အမြင်၊ အလွဲထင်၊ မှားချင်ဒိဌိဖြစ်။
ဒိဌိရောဂါ၊ စွဲကပ်လာ၊ မြန်စွာဆေးကုပစ်။
သောတာပန်ဆေး၊ ပျောက်နိုင်ရေး၊ တော်ဆေးဧကရာဇ်။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ရုပ်နာမ်-သင်္ခါရ-အနိစ္စ တရားတော်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 11, 2012 တွင်7:10pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments4Likes
မိမိခန္ဒာ၊ ဥာဏ်ရှု့ကာ၊ ဖြစ်လာပျက်သုဉ်းကြ။
ပြုပြင်ပေါ်ထွက်၊ ပေါ်ပြီးပျက်၊ သက်သက်အနိစ္စ။
အကြောင်းပြုပြင်၊ ကျိုးတင်ထင်၊ အစဉ်ဖြစ်ပျက်ကြ။
ဓမ္မသဘော၊ ငါမနှော၊ လောလောခန္ဒာပြ။
ခန္ဒာပြမှု၊ အစဉ်ရှု့၊ ငါးခုမဂ္ဂင်္ဂ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ၏ အပါယ်လေးရပ် အိမ်ပိုင်မှတ်တရားတော်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 11, 2012 တွင်6:51pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ၏ “အပါယ်လေးရပ် အိမ်ပိုင်မှတ်တရားတော်”
အတိတ် ရုပ်နာမ်၊ လွန်ပြီးမှတ်၊ ရှု့ရန်ဘယ်မသင့်
အနာဂတ်အရေး၊ မရောက်သေး၊ ရှု့ရေးမမြှော်နှင့်
ပေါ်ဆဲရုပ်နာမ်၊ ပစ္စုပန်၊ ရှု့ဥာဏ်တပ်တပ်ချင့်
8:16pm အချိန်အောက်တိုဘာ 9, 2012, တွင် Peaceangel မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမစာမျက်နှာမှာ ဆုတောင်းလေးရေးပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်......း)
7:01pm အချိန်ဇွန် 18, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျွန်တော် လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ၊ တရားတော်များကိုလည်း ဒီထက်မက သိနိုင်မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်သူဖြစ်ပါစေနော်။ တရားပွဲတွေလည်း များများ ဖန်တီးနိုင်ပါစေအကို။ အမြဲတမ်းခင်မင်လျက်ပါအကိုမျိုးရေ.........။
7:03am အချိန်မေ 28, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:24pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 2012, တွင် ယုယမေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:18pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 2012, တွင် ယုယမေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:45pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 21, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:45pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 21, 2012, တွင် ယုယမေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:19pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 17, 2012, တွင် စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:10pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 12, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုကြီးဖိုးထောင်ေ၇ စွန်းလွန်းဆ၇ာတော်ဘု၇ားကြီး၇ဲ့ တ၇ားတော်များ
6:05pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 5, 2012, တွင် အရှင်သုစိတ္တ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟုတ်ပါပြီ ဒကာတော် ဦးဇင်း ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ.. ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ကလဲ တယ်မလွယ်ဘူးဗျာ့...